Shiinaha Industry News Factory - Cheap Industry News-qeybiye, dhoofisaa
The "Buuhoodle" - A Self-Dheelitirka mooto aad qaadato, waxa uu
waqti Post: 04-20-2018
Tani Koowheel Electric isku dheelli E1 mooto iftiin laakiin firfircoon yahay, patent Cusub oo design qabow moodada, LED screen bandhigay gebi tuso batari iyo xawaaraha, nuugista lama filaan ah super la caag 8inch taayirrada pneumatic. Ka sokow, duubnaadaan oo si fudud u qaado. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku siin karaan aqoonsiga ka ...Read more »
Maxaad doonaysaa inaad A Laba Wheel Self Dheelitirka Electric mooto
waqti Post: 03-21-2018
Waxaa lahaa qaar ka mid ah qaabkoodoo lahaa dhibaatooyinka nidaamka batteriga iyo guddiga hoose shaqo ka eryid. Guddiga ayaa waxaa sidoo kale XSKK oo la dareemayaal cadaadis ka jawaabaan ku raacayaa meel alla baddalo miisaankaaga in. Marka loo hoydo Swagtron ah, cagta talaabada 1aad waqti ka dib. Haddii ay dhacdo in aad ku tiirsan ba ...Read more »
Iskeetboodhyada Electric laga yaabaa Riders Dayuurada
waqti Post: 03-15-2018
Marka lagu daydo hoose muuqday ee lagu iibiyo suuqa, ay la soo keliya u maleeyeen in loo isticmaalo gaadiidka hooyo, isagoo weyn marka aad doonayay inay guriga saaxiib tagno, dugsiga sare, ama qaar ka mid ah gaadiidka kale. Tani skeidgareeyo korontada deg deg ah ku yimaado la jejebiyey a disc gadaal, pneumati weyn ...Read more »
waqti Post: 03-09-2018
Maxaad isweyddiinaysaan waa in la tixgeliyaa? Dabcan ay Safety. Sidaas darteed, waxaan Koowheel rullebrett qeybiyaha korontada helay CE, RoHS, shahaadooyinka FCC UN38.3. Just sida baabuur ama bushkuleeti, kuwaas rullebrett korontada intaasi dheer waa in wax xunna-hayo la ujeedka lagu doonayo in ay maamulaan macaan. Haddii ay u badan tahay waxa ay ...Read more »
Ammaanka yihiin shirkadaha skeidgareeyo korontada waydiinaya su'aalaha ugu wanaagsan?
waqti Post: 03-07-2018
Iyadoo la tixgelinayo dhisida ee skeidgareeyo ah, laga yaabaa in aad ka fikirin ku saabsan qaar ka mid ah dhinaca horumarinta. Haddii aad jeclaan fikradda ah skeidgareeyo koronto, laakiin aad jeceshahay in aad Mudanayaasha jooga, waxaad u baahan tahay si ay u eegno Eon: powertrain korontada qaybsan aasaasiga ah. In dunida deg deg ah Diinna sida kuweenna, ...Read more »
Gadashada Tayada Wanaagsan iyo Cool Electric skeidgareeyo
waqti Post: 03-02-2018
batteriga si buuxda u soo eedeeyo in saabsan 2-3 saacadood, ku tiirsan inta uu miiro. Waxaad xidhay karaa ama Gacantaadaad furtaa intii aad rabto, iyada oo aan walwal ah waxa dhacaya ama duulaya iska. Halkii, aan hal ka mid ah tiro badan unugyada "oo tayo sare leh" waxay lahaayeen awood ah in uu ku dhow yahay in capacit ku qiimeeyo ...Read more »
Xaggee baad doonaysaa in ay tagaan safar guga this?
waqti Post: 02-28-2018
Spring waxaa ugu dhaqsaha badan soo socda, aad jeclaan lahayd si ay u tagaan safar waqti kasta? Ama aad rabto inaad ka soo tago oo sahamiyaan Caalamka kala duwan? Ma rabtaa in aad naftaada ama qoyskaaga siin fasax cajiib ah oo kaamil ah? Haddii jawaabtu tahay Haa, fadlan dooro maalin qoraxdu inuu baxo, markaas aad qabsan doonaan muuqaal aan la filayn dhamaadka ...Read more »
Dheer Journey By Electric skeidgareeyo
waqti Post: 02-23-2018
Waxaa ka qayb qaataan si heer ay qaadanayso qaar ka mid ah hal-abuurnimo oo halis ah in ay u istaagaan soo baxay meelaha lagu skeidgareeyo korontada, fursadaha sida Fariin iyo in-wheel matoorrada regenerative. The gacanta fog wireless loo maleeyay in laga yaabaa of qayb ka ah heerka daciif ah sida uu sameeyey caag qeyrul iyo waxa uu dareensan yahay in si cadaalad ah Che ...Read more »
Period A cusub Of jeebkayga-Electric Iskeetboodhyada
waqti Post: 02-06-2018
Sida caadiga ah, ay sabab u tahay xajmiga iyo miisaanka ah rullebrett iyaga siday tahay arrin. Our inta badan shaqaalaha ku salaysan Germany ayaa muddo dheer lala yaabo ku saabsan "electro-socodka", taas oo walaac weyn siyaasadeed ee Germany oo daacad ah dalalka oo dhan oo dhan iyada oo Europe. Waxaan bixinaa wax iibsadaa Ra'iisul-uruursanayey caawin a ...Read more »
Daaraysaa Electric skeidgareeyo The On dhulka
waqti Post: 01-25-2018
Waxaan sidoo kale u maleeyeen-saabsan mid ka mid ah hababka ugu fiican ee in ay sii xiisad ay khuseyso in drive silsiladda. Ma aha oo dhan hoverboard laakiin keliya, kuwaas oo hoverboards Electric haysta shahaadada ku habboon tahay ammaan in la isticmaalo - waxaa ka mid ah oo dhan ugu sareeya 10 hoverboards fiican hoos ku qoran. Waxaa si kastaba ha ahaatee isagoo de ...Read more »
waqti Post: 01-19-2018
Iyada oo teknoolojiyad sare farsamo is miisaamid, steadiness double la tignoolaji dhisay-in oo shidma cuf, ay aad u fududahay in la xeeriyo, kaliya bedeli aad Murqo miisaanka wadnaha, aad mooto furfurmi hor gudbin doona, dib bay, bidix, midig, iyo xitaa soo jeedin 360 shahaadada ee bar. Mid ka mid ah Fe ugu wanaagsan ...Read more »
Gaar kala duwan Self Dheelitirka Gaadhi curyaanku
waqti Post: 01-12-2018
mannequin waxay leeyihiin in la go'aamiyo sida tayada motor ah. Haa, waxa ay aad u qiimaha badan oo ah lacag, si kastaba ha ahaatee qaadashada eegno dhismaha, iyo tayada sheer ee dhismaha this wiil halis ah, aad la yaaban yihiin in ama aan waa transformer ah ee ku dhuunto. Si fudud rech ...Read more »
The Most xiiso leh Hoverboard Dheelitirka Gaadhi curyaanku 2018
waqti Post: 01-04-2018
Sidoo kale, mooto korontada ku yimaado midabo kala duwan saas oo waxaa kale oo suurtogal ah in ay qurxiyaan la sticker taas oo ah faa'iido u cowl xagashada in soo booda mar mar. Dabcan, waa nooc ka mid ah in loo dedejiyo laga yaabaa in aad u socoto ilaa meel kasta oo ah in aad dooneysa tahay at gudahood ma ...Read more »
Electric skeidgareeyo wuxuu noqon doonaa Cool Christmas Gift in 2018?
waqti Post: 12-22-2017
Christmas waxaa ugu dhaqsaha badan soo socda. Maxaa aad u doonayo in sanadka cusub? Ma waxaad raadineysaa hadiyad qabow iyo moodada aad saaxiibbo ama qoys? Waxaa laga yaabaa in aad kariyana qaar ka mid ah hogaanka toy doonayo liiska oo dhan-agagaarka fikrado hadiyad weyn, ka dibna weli ma ka heli kartaa hadiyad fiican? Haddii aad raadineyso weeyna som ...Read more »
Noocyada Fariin on Electric Iskeetboodhyada
waqti Post: 12-14-2017
In wax kasta oo korontada ah, waxaa jira noocyo dhawr hoose ee braking- firfircoon, khilaaf, iyo Fariin regenerative. Kulligood waxay u isticmaalaan habab kala duwan ee hoos gaabis gaariga. Khilaaf Fariin biriiga khilaaf waa nooc ka mid ah taayarada loo isticmaalo on baabuurta caadiga ah. Muhiimad ahaan, khilaaf agai ...Read more »
The Best Electric skeidgareeyo Boorsooyinka Waayo Board Your
waqti Post: 12-06-2017
Sida caadiga ah aadan rabin in ay qaadaan masaafo dheer skeidgareeyo korontada aad by gacanta, iyo boorsada guddi ka dhigi kara inta badan ka sahlan in sidaas la sameeyo. Iyada oo boorsada board a, waxa kale oo aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si ay u fuliyaan guddoonka in ay ka shaqeeyaan inta lagu jiro subax a roobaadka iyo weli waxaa kortaan dib marka ay sunnier fiidkii. Th ...Read more »
Good Self Dheelitirka mooto Iyadoo APP
waqti Post: 11-30-2017
Waxaa jira hoverboards badan oo aan ruqsadda haysan waxaa laga heli karaa suuqa, iyo waxaad jeceshahay in aad si loo hubiyo in aad leedahay doonaa mid ka mid kaas oo ah amaan in la raaco adiga ama carruurtaada waayo. hoverboards Kuwanu waa ka shirkadaha gebi ahaanba kala duwan ee size iyo qaab kala duwan la heli karo si ay u buuxiyaan baahiyaha qofka. The ...Read more »
rullebrett Electric beddeli laga yaabaa in mee
waqti Post: 11-03-2017
Sida caadiga ah dadka ku nool ay sii kordhayso, dad badan oo door bidaan in ay raad nolosha dheeraad ah moodada iyo ku haboon. Gaar ahaan youngers, oo waxay doonayaan inay sahamiyaan waxyaabaha cusub oo xiiso leh oo dheeraad ah. Sidaas daraaddeed, waxay leeyihiin baahida sare ee qalabka safarka-masaafada gaaban. Dhinaca mid, waxay ku raaxaysan karaan conv ...Read more »
Shiinaha Dibadeed Sporting Electric Self Dheelitirka Gaadhi curyaanku
waqti Post: 10-27-2017
Taasi waa sababta oo ah, kuwaas oo darbi dhaqdhaqaaqa qofka ma loogu tala galay safarka masaafo dheer, si kastaba ha ahaatee waxaa si caddaalad ah loogu talagalay in la sameeyo safaro gaaban fudud oo hufan oo dheeraad ah. Caawiye Bluetooth ku riyaaqayaa shaqada telefoonada wanaagsan iyo qaybaha kala duwan rikoodh play. Oo ay la socdaan, kuwaas oo muuqaalada, dulsaar this ...Read more »
Maxaad The E-skeidgareeyo Sidaas xareysatay Oo Soo dhaweeyay Waxaad By.
waqti Post: 10-19-2017
Taasi waa si buuxda run, markii ay ku yidhaahdeen ay tahay mid gaar ah, waxaa jira nooc ka mid ah sidaas loo yaqaan macruufka suuqa horeba. Kuwani mootooyinka korontada gacanta-free ama skeidgareeyo korontada la qaadi karo si a million goobood, ma laha waxa aad u yeedhay. Koowheel version cusub Electric ...Read more »
The Perfect Cheap Road Off Electric Self Dheelitirka mooto
waqti Post: 10-05-2017
kala duwan oo uu ka mid yahay tixgelinta muhiim ah halka xulashada baabuur koronto ku shaqeeya. Is dheelli mooto ee baabuurta-xawaaraha yar yahay, oo dhan iyo baayacmushtarkaaga u dhigma isku mid. Developed by Koowheel, K7 Hoverboard la xiranayo ah "laba-wheel, car.R gaarka loo leeyahay is-dheelli ...Read more »
Koowheel jiilka 2aad e-skeidgareeyo saaran gaadiid ugu horeysay
waqti Post: 09-29-2017
Hi ~ Sababo la Koowheel jiilka 2aad skeidgareeyo korontada Kooboard waa skeidgareeyo korontada ee ugu horeeyey ee noloshayda, oo aan u dhif ah ku qaataan lacag aad ku iibsato sida toy qaali ah (Waxa intaa dheer in, iibsaday baaskiil raad ku leh "sabab wanaagsan" ...) sidaasi darteed waxaan ahaa danayn si ay u tagaan beerta. Oo anna aad baan painf ...Read more »
About DIY Electric skeidgareeyo
waqti Post: 09-22-2017
Oo ay la socdaan skeidgareeyo korontada waa kulul oo soo dhaweeyay by dadka dhallinyarada ah oo casri ah, ilaa iyo inta leedahay guddi dheelitirka Electric aad u fiican, waxay u badan tahay in ay sameeyaan DIY qaar ka mid ah sida ay u kala jeceshahay. Dhawaan ayaan u ogaato qaar ka mid ah lagu skeidgareeyo DIY qabow on Instagram. Pace: A E-longboard degdeg caawin doona ...Read more »
The Best Hoverboard Self Dheelitirka mooto 2017
waqti Post: 09-19-2017
Sababta ugu yeeray is miisaamid mooto sida "Hoverboard" waa in halka fuushan, waxa ay u muuqataa in aad sida waxaa ka dul tiro ka mid ah inches kor ugu hooseysa. Xusuusnow in aad sii wado xiriirka ay la dhulka ku. Tani waa heer sare ah is laba-wheel dheelli mooto korontada in uu diyaar u yahay in hab dheeraad ah siin ...Read more »
Greatest Trip Holiday Tool-Kooboard nolosha qabow
waqti Post: 09-05-2017
The "E-board" xilligan la heli karo suuqa keliya shabahaya dhaqdhaqaaqa caanka ah, loox khayaalka. Hadda waxaan ka arki kartaa in dad badan oo ka jira dayrta jacayl qalab safarka this. Recently, mid ka mid ah shanta shirkadda Shiinaha brand hoverboard yihiin horumarinta jiilka 2aad longboard korontada ...Read more »
Saddex ugu ammaanka badan oo fiican mootooyinka is miisaamid dib u eegis
waqti Post: 08-23-2017
hoverboard waxaa soo dhaweeyay dad badan oo ka yar, karaa, sababtoo ah waxay ka heshay xad faraxsan oo ku riyaaqay on fuushan hoverboard, laakiin sida loo doorto ammaan mooto isku dheelli? Haddaba i sii daa aan ku talinaynaa saddex ammaansan oo fiican mooto is miisaamid in aad. mid ka mid ah hore waa brand KOOWHEEL ku Self Balanc ...Read more »
safarka Tani waa labada deegaanka oo jaban
waqti Post: 08-07-2017
Monday kasta yimid, rakaabka sidoo kale isugu baska / tareenka, Taasoo ah nolosha daran oo ay jidka ku, waxaan u malaynayaa in aan qalbigeennu waa daal, elaborately in qurxiyo, ugu dambeyntii waxaa lagu qooyay la dhididka cidhiidhiga. In kasta oo qalabka gaadiidka casriga ah waa kala duwan, laakiin sidoo kale ma buuxin dadka oo dhan: baabuurka, sidoo kale xannibi; baska metro, ...Read more »
Farqiga u dhexeeya k8 Koowheel iyo hoverboard 6.5inch joogto ah
waqti Post: 07-26-2017
1. Price Koowheel 6.5inch smart balance wheel k8 is cheaper than regular 6.5inch hoverboard on the market. 2. Apearance Koowheel 6.5inch hoverboard k8 has the following features: private mode. Milan designer, which In line with European and American aesthetic habits. HANGHONG Motor (ensure t...Read more »
Ma is dheelitira mootooyinka ammaan in la isticmaalo?
waqti Post: 07-07-2017
Is isu miisaamo mootooyinka, ama sidoo kale loo yaqaan hoverboard, guddiga miisaamid is, mooto dheelitirka korontada noqday wax aad loo jecel yahay sannadihii la soo dhaafay. Gaar ahaan Maraykanka iyo UK, ay jecel yihiin ka buuxa tartan iyo reyn, ogaado wax funny ka nolol maalmeedka. Kuwani 2 wheel mootooyinka korontada bixiyaan ...Read more »
Yaa ayaa sheegay in aad maalin walba ka dhimo ma noqon karo xiiso leh?
waqti Post: 07-03-2017
Waxaad isha ku skateboard laakiin ha ka daalin oo dhan oo wax u riixaya cagaha kula? Waxaa jira a skeidgareeyo cusub korontada ka Koowheel Shiinaha. Waxaa laga yaabaa in la beddelo jidka ay u guuraan. photo soo socda qaadataa by htfubeck. Thanks for waxa la wadaago. The skeidgareeyo longboard korontada Koowheel waxaa la abuuray oo leh sim ku ...Read more »
Saddexda talooyin ku saabsan xulashada skeidgareeyo korontada
waqti Post: 06-27-2017
Haddaba dad badan oo ay leeyihiin fashion iyo technology codsiga marka safarka go, markaas mooto korontada waa lagama maarmaan in safarka group fashion. Laakiin inta badan waxyaabaha cusub, isku dheelli qiimaha mooto waa qaali, sidaas darteed waa in aan taxaddar marka aan soo iibsadaan. Waxaan ku soo koobay saddex xubno ka purc ...Read more »
Waa maxay nooca waayo-aragnimo lagu skeidgareeyo koronto idinka soo bixin kara?
waqti Post: 06-06-2017
kordhinta caqli leh oo waayo-aragnimo madadaalo Electric Iskeetboodhyada leeyihiin sifooyinkaa madadaalada soo jireenka ah. In 1950, dadka deggan koonfurta bulshada xeebta California dhisay skeidgareeyo ugu horeysay ee adduunka ee. Sida qayb ka mid ah galida on dalka, Electric Hoverboard ayaa diyaarid ...Read more »
Kaas oo safarka qalab kugu habboon yahay?
waqti Post: 05-19-2017
Waqtigan xaadirka ah, in gaadiidka meel fog gaaban, youngers bixiyo in mooto ku dheelitirka, mooto korontada, mooto korontada iyo skeidgareeyo korontada, kuwaas oo afar nooc oo fiiro gaar ah. astaamaha caadiga ah, marka lagu daro korontada, waxa ugu muhiimsan waa karo iyo qaababka cusub oo dheeraad ah, sida w ...Read more »
Maxaad ka E-skeidgareeyo si kulul oo soo dhaweeyay by dadka dhallinyarada ah?
waqti Post: 05-11-2017
Electric skeidgareeyo waxaa ka buuxa oo xiiso leh iyo waxa uu noqonayaa hiwaayad dadka badan oo dhallinyaro ah. Recently, gabdhaha gaar ahaan dad badan oo bilaabi in uu ku biiro kooxda this. Si kastaba ha ahaatee, skeidgareeyo gabdhaha kuwa isticmaalaan ma aha mid dhaqameed, laakiin skeidgareeyo KOOWHEEL D3M dual matoorrada korontada. skeidgareeyo a noocan oo kale ah leh appearan qurux ...Read more »
Sidee ku saabsan ammaanka dadka waaweyn ah fuushan mooto korontada?
waqti Post: 04-17-2017
Haddaba mootooyinka korontada waxa uu noqday dooqa caan ah firaaqada iyo taam ahaanshihiisa. Dadka dhallinyarada ah fuushan mooto ku dheelitirka korontada, ku gudan karaan awoodda dheelitirka iyo reflex, iyo kor u qaadi kartaa horumarka cerebellum iyo kor u qaado horumarka maskaxda, kor loogu qaado wareegga wadnaha. ...Read more »
mooto dheelitirka Electric - Tus nolosha fashion
waqti Post: 04-05-2017
jam Traffic waa dhibaato weyn ee magaalada, oo ay aad u adag tahay raadinta meel la dhigto ah, oo sidaas daraaddeed "ciriiriga" waxa uu noqday magac ugu badan kuwa dadka ku nool magaalada. Sidaas daraaddeed, in Magaalooyinka this, hoverboard korontada dhigi safarka fudud, gaar ahaan xagaaga iyo jiilaalka, ...Read more »